Akụkọ - Otu esi eji igwe kwụ otu ebe iji belata abụba nke ọma n'oge oyi?
Kedu otu esi eji igwe kwụ otu ebe iji belata abụba nke ọma n'oge oyi?
Otu esi eji igwe kwụ otu ebe iji belata abụba nke ọma abụrụla nsogbu maka ọtụtụ afọ. Oge oyi, ọkachasị, na-agbakwunye nsogbu ndị ọzọ na mbelata abụba. N’egwuregwu nile na-efu abụba, ịgba ịnyịnya ígwè iji belata abụba bụ nhọrọ kachasị mma maka mbelata abụba oyi, n’ihi na ọ nwere ntakịrị mmetụta n’ahụ, agaghị adị mfe ike ọgwụgwụ, na-atọkwa ụtọ.
Ọ bụ ezie na mbenata kalori gị nwere ike belata ibu gị, ibu ị tụfuru gụnyere anụ ahụ ike na mgbakwunye na abụba, ndị na-agba ịnyịnya ígwè bụ ndị na-eri naanị nri ga-adị gịrịgịrị ma na-adịkarị njọ, mana ha ga-adịwanye nwayọ nwayọ karịa ka ọ dị na mbụ. N'ihi na ụfọdụ ndị na-eri nri nwere ọbụna ọnọdụ ha na-efulata mana ogo abụba ha na-arị elu. Ọzọkwa, echefula na akwara na-ere abụba. Ka ị na-enwekwu ahụ ike, ị ga-erikwu kcal. Ọ bụrụ na akụkụ nke ibu gị tufuru bụ akwara, ị ga-enwe ike ibili karịa karịa mgbe ị laghachiri n'omume iri nri mbụ gị.
Gba ígwè, ịgba ịnyịnya ígwè, ịgbagharị ọzọ, ihe dị mkpa ikwu ugboro atọ. Ọtụtụ mgbe, ọtụtụ oriri na ọ burnụ burnụ na-agba ọkụ 40 kcal kwa kilomita. Ọ bụrụ na ị gụọ na 15 kilomita kwa elekere, ị nwere ike ire ọkụ 6,000 kcal kwa izu maka 10 awa n’izu. Ọ maghị mma? Bilie ụgbọ ala gị pụọ n'ụlọ!
Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ụgbọelu anaghị arụ ọrụ ihe dị ka ugboro abụọ ma ọ bụ atọ n’izu, ịgba ịnyịnya ígwè, ọbụlagodi kwa ụbọchị, enweghị nsogbu ma ọlị. Ọ bụrụgodị na e nweghị “mmega ahụ a chọrọ!” Uche ahụ nwekwara ike iji nwayọọ nwayọọ kwụsị abụba n'otu ndụ nkịtị. 10gba ọsọ 10km ga-agwụ ike, mana ịnya igwe kwụ otu ebe bụ “aka“ ibiaghachi ”. Ọ dịkwa mma ịga igwe kwụ otu ebe n’ụtụtụ ezumike n’ụbọchị.
Nduzi ọzụzụ Mbelata abụba ọnwa
1. Ebe mmalite maka izu 1-2 ịnyịnya ígwè
1) Gbaa ịnyịnya ígwè maka nkeji 20 × 2 ruo 40 nkeji n'ụbọchị
Ebumnuche bụ isi nke mmega ahụ bụ ijide ogologo oge iji mepụta ahụ nwayọ. E kwuwerị, ọ bụ ihe efu ị ga-eji igwe kwụ otu ebe pụọ ma laa n’ụlọ na nkeji 5 na nkeji 10.
Ndị mbido nwere ike ịgba ịnyịnya otu ụzọ dịka iti aka ha, ya bụ, ihe dị ka nkeji iri abụọ. Otu ụzọ nkeji iri abụọ, ụzọ abụọ bụ nkeji iri anọ. Igha 50kg, ihe a na-eri kcal bụ: 10km / hx 140 kcal, 13km / hx 175 kcal, 16km / hx 210 kcal, were gabazie.
Usoro maka ịgbakọ oriri nke kcal bụ: kcal (kcal) iri, ọsọ (km / h) × arọ (n'arọ) × 1.05 time oge ịgba ịnyịnya (h).
2) Ọ bụ ụgbọala dị nkeji 90 site na ngwụsị izu agha
Họrọ otu ụbọchị na ngwụsị izu ma nwee ike ịgba obere ntakịrị ihe dị ka elekere elekere ogologo, na-agbanwe ọnọdụ gị ozugbo. Họta njem ịnyịnya ígwè kwesịrị ekwesị n'akụkụ ogige ma ọ bụ n'okporo ụzọ raara onwe ya nye na osimiri ma ị ga-enwe ike ịgba ịnyịnya ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nkeji 90 (gụnyere ụzọ azụ).
Mgbe ị na-agba ọsụsọ, a ga-eme ka mmiri gwụchaa n'oge. Aụọ otu iko mmiri tupu ịnyịnya ígwè, ọ ga-akacha mma iweta ketulu n'okporo ụzọ kwa nkeji iri na ise ruo iri abụọ. A na-atụ aro ka ịhọrọ Satọde, ndị ọzọ sunday, naanị n'ụlọ iji lekọta ahụ na uche nke ọma. Nchebara echiche A ga-ebugharị ịnyịnya ígwè n'okporo ụzọ na-abụghị nke moto ma ọ bụ ịgba ịnyịnya n'okporo ụzọ ndụ, họrọ ụzọ ndị nwere obere okporo ụzọ dị ka o kwere mee, ma zere ndị ji ụkwụ aga etu o kwere mee n'okporo ụzọ ndị ha nwere ike ịgba.
2. Meewanye mmega ahụ na izu 3-4
Mgbaru Ọsọ: Oge elekere 1 na-abụkarị, awa 2 na ngwụsị izu
Mgbe ịgba ịnyịnya ígwè mara gị ahụ, ị ​​nwere ike jiri nwayọ gbasie ike ma gbatịa njem ịgba ịnyịnya gị dịka ọnọdụ gị si dị. Chọsie ike maka elekere 1 kwa ụbọchị. Achọghị izu ike na ngwụsị izu ma gbalịa idobe igwe kwụ otu ebe na awa 2. Iji zere ike ọgwụgwụ n'oge njem ahụ, kpachara anya iji rehydration n'oge dị n'oge njem ahụ, ma ọ bụ drinkụọ mmanya na-aba n'anya.
Otu esi mezue otu ọnwa mwepu 2kg:
1kg abụba dị ihe dị ka 7,200 kcal na abụba 2kg bụ ihe dị ka 14,400 kcal. Enwere ike belata ndị a n'ime ihe na-erughị otu ọnwa?
Dabere na usoro a dị elu, n'ime izu abụọ dịka ọsọ ọsọ nke 13 kilomita kwa awa, ngwụsị izu nke 16 kilomita kwa elekere, ụbọchị iri na anọ e mere atụmatụ kcal gbakọtara 2,695 kcal gbakọọ, otu ọnwa nwere ike iri 7,105 kcal, ya bụ, nwere ike belata ahụ 1 n'arọ nke abụba. A ga-ebelata 1kg fọdụrụnụ site na irikọ nri ọnụ, na mfu nke 243kcal kwa ụbọchị dị mkpa. Mgbe ahụ kcal kwesịrị belata bụ 80 kcal kwa nri.
Lee ụfọdụ ụzọ isi belata kcal oriri:
Họrọ azu ohuru: Otu mkpọ nke azu nwere mmanụ nke nwere mmanụ esi nri nwere 275 kcal, mana ọ bụrụ na ọ dị ọhụrụ, ọ bụ naanị 150 kcal. (Mee ka 125 kcal belata)
Họrọ akọrọ chiiz na abụba dị ala: Jiri chiiz akọrọ na abụba 1% karịa 4%. (Ọkara iko nwere ike ịchekwa 40kcal)
Belata stachi: Rie ihe na-erughi otu efere 1/4 nke osikapa, pasta na noodles. (Belata site na 45 ruo 60kcal)
Họrọ bred na-esi ísì ụtọ na margarine: ngaji nke butter butter na margarine nwere 100 kcal, ma butter-flavored butter na margarine bụ naanị 50 kcal. (Zọpụta 50kcal)
Rie naanị protein: Mgbe ị na-eri akwa, wepụ yolks ma chekwaa 50 kcal kwa scoop. (Zọpụta 50kcal)
Rie mkpụrụ osisi karịa mmiri ihe ọ juiceụ juiceụ: Oroma na-adịkarị kcal 60, mana otu iko mmanya oroma nwere 110 kcal. Ya mere, họrọ nkpuru ohuru! (Zọpụta 50kcal)
Họrọ chiiz ude dị mfe: 2 scoops nke chiiz ude mmiri nwere 60 kcal, ebe chiiz ude chiiz nwere 100 kcal. (Zọpụta 40kcal)
Mee ezigbo nri gbanwere: Maka nri ụtụtụ ma ọ bụ nri ehihie, họrọ 110kcal tortilla karịa nke donut nkịtị. The donut nwere kcal nke 240. (Zọpụta 130kcal)
Nlekọta maka ibelata abụba site na igwe kwụ otu ebe
1. Ọnọdụ nke oche. Mmadu guzo n’elu ala bulie otu ụkwụ, elu apata ụkwụ ya na ala dabara na ogo nke oche ahụ.
2. A naghị atụ aro ka ị buru ibu (azu paaki) ịgba ígwè, mmega igwe bụ ọkachasị oge, ọ bụrụ na ibu arọ nke ịgba ígwè, ọ nwere ike imerụ azụ na azụ lumbar.
3. Mgbe egwuregwu na-eyi uwe egwuregwu ọkachamara, onye nwere ike ịbụ mgbochi, abụọ nwere ike ịdaba na-echebe aka, ọ bụghị ọnya.
N'agbanyeghị ụdị igwe kwụ otu ebe ị na-agba, ọ bụrụ na ọ bụ maka ebumnuche ọnwụ, ị ga-achọ ịmegharị mmiri ọ bụla na 5-10 nkeji.
5. N'agbanyeghị nke ahụ mechie ọnụ gị, mmụba nke ịnyịnya ígwè ga-eme ka agụụ ndị mmadụ ka mma, ọ bụrụ na ịnweghị ike ịhapụ nri kalori dị elu, na-enwe nri dị ka ọ masịrị gị, ọ nwere ike isiri gị ike imezu ebumnuche nke mbenata abụba.